Khasaaraha ka Dhashay Isku-dhac laba beelood ku dhex-maray Gobolka Sool iyo Xog-warranka Badhasaabka Gobolkaas oo ka hadlay | Somaliland Post
Home News Khasaaraha ka Dhashay Isku-dhac laba beelood ku dhex-maray Gobolka Sool iyo Xog-warranka...
Khasaaraha ka Dhashay Isku-dhac laba beelood ku dhex-maray Gobolka Sool iyo Xog-warranka Badhasaabka Gobolkaas oo ka hadlay
Hargeysa (SLpost)- Sagaal ruux ayaa la sheegay in ay ku dhinteen shaqaaqo dhexmartay laba beelood meesha loo yaqaano dharkayn-geenyo oo ka tirsan gobolka Sool, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. sida uu noo xaqiijiyay Guddoomiyaha gobolka Sool Musate Cabdi Ciise (Mustafe-shiine).
Dagaalka dhexmaray labada beelood ayaa la sheegay in uu ka bilaabmay khilaaf ka dhashay Maq ay u kala qaadanayeen dhibaato hore u dhexmartay labdaasi beelood. Isagoo xusay guddoomiyuhu in gudiga nabadgeliyadda ee gobolka Sool ay isla shalay ka fadhiisteen arrintaasi isla markaana ay ka soo saareen g’aamo lagu deminayo colaadaasi.Guddoomiyaha gobolka Sool Mustafe Cabdi Ciise, oo xalay khadka telefoonka ugu waramay wargayska DAWAN.isagoo joogay magaaladda Laascaanood. Waxa uu yidhi ”Dagaalka saaka (shalay) ka dhacay Dharkayn-geenyo waa mid jira, waxaanu ka bilaabmay xoolo mageed oo lagu kala qaadanayey dhib hore oo labadaa dhinac u kala gaadhay ilaa iyo hadda tirada dhimashada ee aanu ka maamul ahaan haynaa waa 9 nin labada dhinacba.
Iyadoo ay jirto tiro ka badinaysaa waayo waxaanu ka war haynaa in dagaalku laba jeer dhacay oo galabta (shalay galab) goor gaaban dagaal danbe dhacay. Halka dhaawucuna uu tiradaa ka badan yahay mana jirro wax dhaawac ah oo magaalada Laascaanood na loogu keenay.”
Waxa kale oo gudoomiyuhu uu sheegay in gudida nabadgelyada gobolku ka fadhiisteen go’aamana ka soo saareen deminta iyo wax ka qabashadda arrintaasi, go’aamadaasi oo ay ka mid yihiin “In maadaama magaalada Laascaanood labada reer-ba joogaan ciidanka, hubka, saanada iyo sahaydaba intaba ay ka heli karaan oo ay u taalo in aanu xidhno dhamaan dariiqyada oo dhan si aanay xoojin u helin, sidoo kalena guddi ahaan waxaan soo saarnay baaq nabadeed oo ku wajahan labada dhinac” ayuu yidhi Mustafe-shiine.
Badhasaabku waxa uu intaasi ku daraya in ay xukuumada sare iyo wasaaradooda arrimaha gudaha la socodsiiyeen kana sugayaan amar iyo go’aan wasaaradeed iyo mid xukuumadeedba taasna ay si dhaqso ah uga sugayaan jawaab ay ku hawlgalaan.
Dhinaca kale garaad Cabdirisaaq Garaad Soofe oo ka mid ah madaxda dhaqanka ee gobolka Buuhoodle, ayaa baaq nabadeed u diray beelaha shaqaaqadu dhex martay, waxaanu yidhi “Waxaanu ku baaqaynaa anigoo ku hadlaya afka madaxda dhaqanka ee gobolka iyo deegaankaba in colaaddaas la joojiyo, xabada qoriga laga saaro, noloshana uu qorigu u danbeeyo. Sidoo kale ay yihiin dad walaalo ah ood-wadaag ah ceel iyo carshinba wadaaga, wiil, abti, seedi iyo sodog isku yihiin ILLAAHAY waxaan uga baryeynaa inuu kala qaboojiyo oo nabad iyo maslaxad khayr qabtana kala dhex dhigo.”